China Inogadziriswazve Simuka Pouches fekitori uye vanotengesa | NEMANGWANA
Inogadziriswazve Simuka Pouches. Kazhinji iine hwindo rakajeka rekuona chigadzirwa, aya mabhegi anopa yakasimba kutarisisa pasherefesi yesupamaketi apo ichipa nzvimbo kugona kwekubatira.
Recyclable Simuka Homwe, ndiyo inonyanya kuchinjika uye inochinjika bhegi mhando, ichibvumira vatengi kuti vagadzirise chimiro uye saizi zvinoenderana nezvavo. Idzo sarudzo hombe dzeakaomeswa uye kunyangwe emvura chigadzirwa. Tinogona kuseta zviri nyore fafitera yezvigadzirwa kuti tivandudze zvinoonekwa pasherufu yesupamaketi. Iyo yepasi inomira yakatwasuka kana izere nezvigadzirwa. Musoro wehombodo unochengetedzwa nekucheka-kureka uye zipi inogadziriswa. Kuti uwedzere ushamwari hwevashandisi, A laser line inogona kuwedzerwa kumusoro kwe zipi .Ne 9 + 1 ruvara kupurindwa ne gravure, bhegi rine mhando yepamusoro uye yakanaka kudhinda maturo
Yedu Inogadziriswazve Simuka Pouches inouya mune maviri akasiyana dhizaini, K-chisimbiso pasi homwe uye yakatenderera pasi homwe.
K-chisimbiso pasi, zvisimbiso pamativi ese maviri zvinomuka zviri nyore pakona yemadhigirii makumi matatu kudzikisa kumanikidza padivi rebhegi. Izvo zvakanaka kune zvinhu zvinorema;
Yepazasi pasi yakasungirirwa padivi, ichivimbisa maonero akanaka eiyo bhegi rese. Izvo zvakanaka kune vakareruka zvinhu.
Ose ari maviri anopa yakakwenenzverwa yezvivakwa kuchengetedza zvirimo zvitsva.
Inogonesa nzvimbo yakaturika yekutengesa.
Mhando dzakasiyana uye masipuni uye maishu anowanikwa, makobvu anotendera kudururwa nyore kwezvakaoma zvigadzirwa uye zvinwiwa.
Akagadzirirwa zvigadzirwa zvekumisa
Akaisa gusset kana gejo pasi
Tsika dzakaumbwa zvikwama zviripo
Zvigadziriswazve zvinodzokororwa maficha zviripo kune vatengi nyore
Standard chipingamupinyi sarudzo inopa yakanakisa hunyoro chipingamupinyi
Yakakwirira chipingamupinyi sarudzo inopa yakanakisa okisijeni uye hunyoro chipingamupinyi
Pamusoro kudhinda neinodzivirira overprint varnish
Inowanikwa neakajeka hwindo
Pashure: Inogadziriswazve Rutivi Gusset Pouches
Zvadaro: 3 padivi rakavharwa & pombi pombi / Vacuum Plastiki Bhegi / Chikafu Plastiki Bhegi